Maxaad ubaahan tahay inaad ka raadsato adeegyada la-talinta Amazon?
Haddii aad ku jirto marxaladda go'aaminta waxa aad jeceshahay in aad tafaariiqda iyo sida ay macquul u tahay in aad sameyso baaritaano iyo falanqeyn si loo go'aamiyo waxa aad u baahan tahay si aad u noqoto boodhadh barwaaqo ah? Si kastaba ha noqotee, sharci ahaan, kuma filna inaad eegto xeerarka qaar iyo khibradaha khibrad leh si ay si sax ah u dhisto ganacsigaaga. Weli waxaad u baahan tahay qof leh waayo-aragnimo oo buuxin kara khilaafaadka aqoontaada oo ku hagaya waddada saxda ah. Fursada ugu wanaagsan ee aad adigu waxay noqon doontaa inaad la xiriirto khabiir la-taliyaha Amazon. Mashruucan gaaban, waxaan ka wada hadli doonaa sida loo helo khibradda xirfadlaha ah ee Amazon oo si sax ah u billow waddadaada ecommerce.
Raadi adeegyada la-talinta Amazon oo ay ku jiraan naqshadaynta raadinta raadinta
Waxyaabaha ugu horreeya ee aad u baahan tahay in aad eegto adeegyada la-talinta Amazon waa SEO. Hagaajinta Guud guud ahaanba way ka duwan tahay Amazon SEO, waxaadna u baahan tahay inaad heshid qof leh waayo-aragnimo ku leh qaybtan.
Guud ahaan, Amazon waa mashiinka raadinta sida Google, Bing, iyo kuwa kale. Farqiga ayaa ah in dadka isticmaala Amazon ay raadiyaan alaabta kaliya. Taasina waa sababta mashiinka raadinta loo dhisay oo lagu dhajiyay algorithm kala duwan oo loo adeegsanayo in lagu caawiyo Amazon kaliya heshiisyada wanaagsan. Waxa kale oo aad ka heli kartaa alaabta Amazon adigoo raadinaya Google. Sida caadiga ah natiijooyinkaasi waxay ku saleysan yihiin booska SERP ee koowaad ama labaad. Si kastaba ha ahaatee, kuwa ugu isticmaala waxay u sahlanaataa inay fududaadaan si toos ah u tagaan Amazon marka ay raadinayaan alaabooyinka sida halkan waxay ka heli karaan faahfaahinta loo baahan yahay oo isbarbar dhiga qiimaha. Marka ay dadka isticmaala baaritaanka Amazon mid ka mid ah su'aalaha aad ku qortay, waxaad u baahan tahay alaabtaada muuqaalka sare. Taasi waa sababta aad u raadinayso la-taliyaha oo fahmaya asaasida asaasiga ah ee Amazon iyo wuxuu ogyahay sida loo xayeysiiyo liiska alaabtaada A9 algorithm.
Hubi in lataliyahaagu raaco qawaaniinta aminada (Amazon)
Amazon waxay leedahay tilmaamihiisa sida iibiyayaashu ay u maareynayaan ganacsigooda meeshan. Taasi waa sababta aad u baahan tahay inaad hesho khabiir ah oo si joogta ah ula soconaya dhammaan wixii cusbooneysiin ah oo cusub iyo casriyeynta. Waa inuu awood u yeesho inuu sharxo sida loola tacaalo isbeddelladan iyo waxa la sameeyo si looga hortago ganacsigaaga dhibcaha. Waxaa intaa dheer, la taliyaha suuq-geynta Amazon waa inuu ogaadaa dhammaan xeerarka la xiriira iibinta on Amazon iyo dhisidda suuqgeyntiisa ama istaraatejiyadaha istaraatiijiyadeed iyaga oo raacaya. Lataliye iibiya khibrad leh waa inuu awood u leeyahay inuu sharaxo farqiga u dhaxeeya Vendor Central iyo Barnaamijka Central Sales
La taliyaha wanaagsan ee Amazon waa inuu fahmaa faraqa u dhexeeya koowaad iyo iibiyeyaasha saddexaad oo awood u leh inay doortaan ku haboonaanta ganacsigaaga Amazon. Waxaa jira laba barnaamij oo kala duwan Amazon barnaamijka Vendor Central iyo Sales Central. Waxay bixiyaan doorashooyin kala duwan iyagoo ku xiran nooca ganacsiga aad leedahay iyo ujeedooyinka ganacsigaaga. Ganacsatada hadda bilaabaya horumarinta ganacsigooda ayaa laga yaabaa inay dareemaan jahwareer ku saabsan doorashadan. Hawlaha ugu muhiimsan ee la taliyaha waa inay muujiyaan farqiga u dhexeeya barnaamijyada iyo saadaalinta in barnaamijka la soo xulay uu ku qancin doono baahidaada ganacsigaaga ama haddii kale Source .